Home News Madaxweyne Waare iyo Wasiir Caadle oo qir iyo qir kala taagan ka...
Madaxweyne Waare iyo Wasiir Caadle oo qir iyo qir kala taagan ka dib Magacaabistii!!
Sida ay sheegayaan wararka aynu ka heleeyno Magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka hirshabeelle khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan qaar ka mid ah golaha wasiirada Maamulkaasi iyo Madaxweyne Maxamed Cabdi waare.
MOL wararkii ugu dambeeyay oo ay heshay waxaa ay sheegayaan in Madaxweyne Maxamed Cabdi waare uu ka xanaaqay xil ka qaadis lagu sameeyay gudoomiyayaasha degmooyinka jalalaqsi iyo buula-burde ee gobolka hiiraan.
Wasiirka arrimaha gudaha Maamulka Hirshabeelle caadle ayaa ku wargeliyay Madaxweynaha in uusan soo faragashan arrimaha shaqadiisa ah,arintaan ayaa buuq dhalisay waxaana cali guudlaawe uu isku dayayaa in uu qaboojiyo inta aysan faafin.
Maamulka hirshabeelle ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxaa ay iskugu qabsadeen arrimo la xariiro magacaabis,lamana ogo arintaan sida lagu xalin doono
Previous articleDowlada Soomaaliya oo sheegtay in Daacish kusoo xoogeeysatay Magaalooyin dhowr ah
Next articleVIDEO: Xassan Daahir Aweeys”Kheeyre qalad ayeey kugu tahay inaad Doha kasoo hanjabto,waa ceeb bilaa caleeyk”
Mareeykanka oo 37 oo Al-shabaab ah ku dilay gobolka Mudug!!
Puntland oo shaacisay goobta lagasoo abaabulo weerarada ka dhaca Boosaaso!!!